Inweta ego webwerf na blog gị ọ dị mfe ịchụ ego karia ịmalite azụmahịa omenala ma ị gaghị eleba iwu iwu mkpochapụ anya ma ọ bụ tinye maka ikikere ụlọ.
Otu n’ime iwu iwu kachasị mkpa ma dị mkpa bụ iwu nzuzo, nke a na-emetụta weebụsaịtị, nnukwu ma ọ bụ obere. Ọ bụrụ na ị bụ obere aụụmahịa ma ọ bụ ọbụnadị blogger na-enweghị ego site na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ejighị n’aka ihe kpatara ụwa na mbụ ị ga-achọ otu, ị nwere ike ijuanya.
Ohere dị elu nke na ị ga – adị (ọ bụrụgodị na ị maghị ya) – ichikota ụdị ozi dị ich ich ich site na ndị ọbịa gị, na – edebe ha nchịkọta, ma ọ bụ na – egosipụta mgbasa ozi. Maka ọtụtụ n’ime ihe omume ndị a, ohere ndị dị elu dị elu na achọrọ ka ị nwee iwu nzuzo.
Ihe obula a choro bu dabere na iwu ma obu iwu ndi ozo. Ọzọkwa, nkọwa nke ihe bụ "ozi nkeonwe" dịgasị, mana ọ na-agụnye aha na adreesị e-pos, na mgbe ụfọdụ, adreesị IP na kuki nchọgharị.
Na oge ọmụma, data bụ ego ọhụrụ. Ozi nzuzo nke ndị mmadụ n’otu n’otu bara ezigbo uru nuwe ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, na gọọmentị.
Taa, ọtụtụ mba na-eleba anya na nzuzo dị ka ikike dị mkpa nke ụmụ mmadụ, ha agafewokwa iwu iji chebe ndị mmadụ site n’ihe ọmụma ha na-anakọta ma jiri na-enweghị ihe ọmụma ha. Iwu nzuzo nzuzo na-achọkarị na onye ọ bụla na-anakọta ozi nkeonwe site na ebe nrụọrụ weebụ ha ga-enwe nkwupụta na otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
Iwu Nzuzo Australië (APP’s) bụ nchịkọta nke ụkpụrụ 13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe. Dịka ụkpụrụ ndị a si dị, ị ghaghị ijikwa ozi nkeonwe na ụzọ a na-emeghe na nke a na-emeghe.
Ntuziaka nchekwa data en data van die Europese Unie 1998 ekwu na onye ọ bụla nhazi data wat jy wil hê jy moet aghaghị ime ya n’ụzọ ziri ezi ma kwadoro. Iji mee ka nch datakọta data weere ya dị ka iwu kwadoro, a ga-anakọta data nanị maka akọwapụtara nke ọma, nke doro anya na nke ziri ezi.
Nzuzo UK na Usoro Ntanetị Electronic 2003 na-egbochi ojiji nke kuki na tegnụzụ ndị yiri ya na ngwaọrụ ndị ọrụ ọ gwụla ma ndị ọrụ 1) doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2) enyewo nkwenye ha.
Tinye ụrụ (ntụgharị Google Adsense) ị na-eji na ụdị data ị na-anakọta,
* Slegs onyinyo iji gbasaa.
Karịa ọrụ 600, meer Facebook Like, Google Adsense, Google Analytics, knoppie LinkedIn, Twitter, Alexa Metrics, Amazon Associates; edozi ya na usoro ozo.
Na $ 39 / mo (oche!), Usoro ahụ ga-enyere aka:
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka nsogbu, iwepu akụkụ a dị mkpa nke blog gị nwere ike ibute nsogbu n’ọnọdụ. Reallychọghị ihe ọ bụla ịchọrọ ka amachibido ya na netwọkụ Mgbakwunye gị ma ọ bụ ịbụ onye onye ọbịa websaịtị na-agba akwụkwọ.
Chebe moet op die webwerf na iji otu n’ime ngwaọrụ ndị dị n’elu iji mepụta iwu nzuzo gị ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị! Usoro ahụ ga-enyekwara gị aka ịmata onwe gị na nkọwa bara uru na nzuzo onye ọrụ.